Inona no atao hoe heterogène amin'ny siansa
Ny teny heterogeneous dia teny filamatra izay midika hoe avy amin'ny singa samihafa na singa miavaka.
Ao amin'ny simia, ny teny dia matetika ampiharina amin'ny famolahana heterogène . Io no iray izay manana rafitra tsy misy fanamiana. Voangona ny fasika sy ny rano. Ny concrete dia tsy manan-danja. Mifanohitra amin'izany, ny fifangaroana homogenny dia manana firafitra samihafa. Ohatra iray ny fifangaroan'ny siramamy miserana ao anaty rano.
Na mifangaro na miray hina ny olona iray, dia miankina amin'ny halehibe na ny habeny. Ohatra, raha mijery fasiana fasika iray ianao, dia toa toa zara raha ampitahaina amin'ny ampahany kely (homogeneous). Raha hitanao ny fasika eo ambanin'ny mikrôka, dia mety ho hitanao fa tsy misy dikany ny vatana.
Amin'ny siansa matematika, dia mety ho ny metaly, ny singa, na ny legioma ihany no ahafantarana azy ireo, kanefa dia mampiseho ny dingana heterogénous na ny rafitra kristaly. Ohatra, ny vy iray , raha oharina amin'ny firaiketam-po, dia mety misy faritra marenina sy ny hafa amin'ny ferrite. Ny santionan'ny phosphorus element dia mety ahitana fotsy fotsy sy fotsy.
Amin'ny ankapobeny, ny vondron'olon-tsivana rehetra dia azo lazaina ho tsy misy dikany. Ny vondron'olona iray dia mety ho tsy manan-danja amin'ny vanim-potoana, ny lanjany, ny haavony, sns.
Nahoana no mangatsiaka ny gaza?
Fifandonana tery - Famaritana sy fanandramana
Ny fomba amam-panao amin'ny ranomandry
Nahoana ny haavon'ny rivodoza no mora kokoa noho ny ranomasina?
Biôlôjia: Ny Fianarana ny Fiainana
Maya Angelou: mpanoratra sady mpikatroka mafàna fo amin'ny fiarovana sivily
Jeografia tany Gresy fahiny
La Bella Principessa avy amin'i Leonardo da Vinci
Etos inventa (Rhetoric)
Fombafomba fandevenana sy fandevenana
Manoratra boky bibliothérique ho an'ny taratasy
Ny anarana NELSON sy ny tantaram-pianakaviana
Ny fomba fijerin'ny Krismasy momba ny toetr'andro amin'ny taona vaovao
Fitsipika fototra momba ny fiarovana
Bank Shot - Torohevitra mahagaga ho an'ny banky fitifiran'ny banky marobe
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fahamendrehana sy ny fahamarinana?
Galaxy Clusters: Ny manodidina ny manodidina
Ady fito taona: Battle of Plassey
Fanomezana mari-pahaizana momba ny mpampianatra